रोग • nepalhealthnews.com
पीएसपी रोगका कारण कादर खानको मृत्यु, के हो पिएसपी ?
क्यानडाको एक अस्पतालमा निधन भएका कादर खानका छोरा सरफराज खानका अनुसार उनका पितालाई १६-१७ हप्तादेखि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। ३१ डिसेम्बरको साँझ उनको निधन भएको थियो। उनले भने, ”उनको अन्तिम संस्कार क्यानडामैँ गरिनेछ। हाम्रो परिवार यहीँ छ
नेपालबाट क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा डीएम गर्ने पहिलो डाक्टर
डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ नेपालबाट उत्पादन भएको पहिलो डीएम गर्ने क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । डा. हेमराज पनेरु र डा. निरज कयालले भर्खरै मात्र क्रिटिकल केयरमा डिएम सक्नुभएको छ भने डा. सौरभ प्रधान, डा. सुनिल पाठक र
स्कोलियोसिस के हो ?
स्कोलियोसिस मेरुदण्डमा हुने हड्डीसम्बन्धी रोग हो । जसमा बाहिरबाट हेर्दा नै मेरुदण्ड एकातिर झुकेको जस्तो देखिन्छ । हाल विश्वका लाखौँ मानिस स्कोलियोसिसबाट पीडित छन् । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म नै यो रोगबाट प्रताडित भएको पाइन्छ । हुने कारण स्कोलियोसिस
जाडो मौसममा किन बढ्छ दम ?
नेपालमा मौसम परिवर्तन सँगसँगै दमका बिरामीको संख्यामा पनि बृद्धि भइरहेको छ । तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय जाडो मौसममा दमका बिरामीहरु अत्याधिक मात्रामा बढीरहेका छन् । दम बिभिन्न प्रकारका हुन्छन । दम भन्नाले सामान्य भाषामा कुनै पनि मानिसलाई
जटिल किसिमको मुटुको शल्यक्रिया
एओर्टा मुटुबाट पम्प गर्ने ठूलो नसा हो । विभिन्न कारणले यो सुन्निएको अवस्थामा फुट्ने र भित्ता च्यातिने डर हुन्छ । यसरी च्यातिएको एओर्टालाई आकस्मिक शल्यक्रिया गरेर बिरामी बचाउनुपर्छ । यो इन्डोभास्कुलर र ओपन दुवै किसिमबाट गर्न सकिन्छ
रक्तनली ब्लकमा एन्जिओप्लाष्टी
४० वर्ष मुनिका व्यक्ति हृदयघात भएर अस्पताल आउने क्रम एकदमै बढेको छ । २० वर्ष उमेर भन्दामाथिका व्यक्तिलाई हृदयघात भएको प्रशस्तै भेटिन्छ । विकसित राष्ट्रमा भन्दा पनि अविकसित राष्ट्रहरुमा मुटुरोगी बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । मुटु
२२—२४ वर्षमै हृदयघात !
उपचारका क्रममा मुटुसम्बन्धि बढ्दो समस्याबारे कस्तो अनुभव सँगालिरहनुभएको छ ? दैनिक मुटु र रक्तनलीसम्बन्धि समस्या भएका करिब ४० जनाभन्दा बढी बिरामीलाई बहिरङ्ग उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छु । युवापुस्तामा हृदयघात नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
मुटुमा कसरी पुग्छ क्षति
मुटुले रगत पम्प गरेर शरीरका हरेक तन्तु र कोषमा अक्सिजन र पोषण तत्व पु¥याउँछ । यसैगरी मुटुमा पुगेको अशुद्ध रगत मुटुले पम्प गरेर फोक्सोको रगत सफा गर्ने क्यापिलरीमा पठाइदिन्छ । यहाँ अक्सिनेसन हुन्छ । रगतमा अक्सिजनको मात्रा
जोर्नी सुन्निने, दुःख्ने र अरठ्ठ हुने गठीया बाथ
के तपाईंलाई जोर्नी सुन्निने, दुःख्ने र अरठ्ठ हुने समस्या छ ? यदि भएमा यो गठीया बाथ हुनसक्छ । गठीया बाथ अटोइम्युन दीर्घकालीन रोग हो । मानव शरीरमा भएको रक्तकोषिकाले आफ्नै शरीरका मिर्गौला, जोर्नी, रगत लगायतका विभिन्न अंगहरुलाई